Xtensio: Gadzira, Gadzirisa, uye Paridzira Yako Creative Collateral | Martech Zone
Chipiri, April 28, 2020 Chipiri, April 28, 2020 Douglas Karr
Xtensio chirongwa chakamisikidzwa uye hubhu hwekutaurirana uko masangano anoita nekuronga zvekushambadzira mukati meboka remukati, vatengi uye vanobatirana. Vaka uye ugovane chero chibvumirano chaunoda nemupepeti. Zvaunotumira zvinowirirana sekuchinja kweprojekti yako. Kunyangwe iwe urikuratidzira mushandirapamwe mukuru, kururamisa kutaurirana kwako kwemukati, kana kugadzira mishumo uye zvidzidzo zvezviitiko, Xtensio ndipo panoyerera basa reboka rako.
Gadzira Yakashambadzirwa Kushambadzira Chibvumirano Pasina Mugadziri
ne Xtensio, timu yako inogona kuvaka chero chinhu kubva kune yakasarudzika vatengi manas, zvinongedzo, zvirongwa zvekusimudzira uye mapeji ekumhara zviri nyore nemuvaki webhu. Wobva wakurumidza kushandisazve, gadziridza uye gadzirisa zvemukati zvemushandirapamwe wakasiyana. Zvakanakira zvinosanganisira:
Sevha nguva pane dhizaini - Wese munhu ari muchikwata anova mugadziri. Dhonza uye udonhedze anowirirana ma module - mufananidzo, vhidhiyo, magirafu, machati. Chinja iyo ruvara, kumashure kana saizi. Chinja marongero zvisinei zvaunoda.
Pasina simba chiratidzo chinoburitswa - Dudzira dhairekitori rechikwata chako nemafonti ekambani yako uye pendi yemavara kukiya mucherechedzo muchikwata. Tongedza zvakagovaniswa zvinongedzo uye wedzera mapassword kuti uchengete chibvumirano chesangano rako pachivande uye chakachengeteka.
Gonesa kubatana kweboka - Shandai pamwechete sechikwata pamadhipatimendi uye manejimendi. Shanduko dzese dzakachengetedzwa uye dzinoenderana pane ese madhizaini. Wese munhu anogara ari-up-to-zuva uye yako inbox haina mutsindo-yemahara.
Isu taida kuva ne nzvimbo kuti tishande pamwe chete, uye zvinodawo kuti tipe ruzivo kune vamwe. Munguva yakapfuura, takashandisa Asana kushanda pamwe chete, uye PowerPoint kupa kune vamwe vanobatana. Xtensio inotsiva kudiwa kwezvose zviri zviviri zvinoyevedza. Tinogona kushanda pamwe chete, ipapo nekugovana tisina kutumira zvinongedzo izvo zvaunofanirwa kuchengetedza mavhezheni akasiyana nemazita akasarudzika - imi mese munoziva kuti chibhorani - uyezve shandisa chishandiso chakafanana kuratidza.
David Nason, CEO / Muvambi weHireBrain
Paridza, Goverana, uye Dhawunirodha Yako Chibvumirano
Kuita kubatana nevatorwa vekunze-vatongi kana vatengi zvive nyore, Xtensio inopa kugona ku:
Goverana live weblink - Tumira kukosha kwakakosha seyakagadziriswa webhu inoenderana. Wedzera kudzivirirwa kwepassword. Hapanazve kutumira zvakanamatira pamwe neshanduro nezvose zvinogadziridzwa kugwaro.
Ipa dhiraidhi yedhijitari - Nekudzvanya kamwe chete, peji rako rinoshanduka kuita raidhi dhiraidhi. Ipa nzvimbo inobata uye yekudyidzana kubva chero kupi. Chikamu chega chega chefosi inova slide.
Dhawunirodha faira rePDF kana rePNG - Kunyangwe iwe ukaedza zvakadii kuenda zvachose kudigital, chimwe chibatiso chinofanirwa kuchengetwa sekopi yakaoma. Tumira kunze kwako kwese folio kana zvinhu zvakasarudzika sePDF kana maPNG mafaera
Saina Up kune Xtensio
Pachivande Gadzira Nzvimbo Yekushandira Yako Agency uye Vatengi
Xtensio yeBhizinesi inopa yakavanzika uye yakashongedzwa nzvimbo yekushandira yekubatanidza yako budiriro, chigadzirwa, kutengesa uye manejimendi zvikwata neruzivo rwavanoda.
Nyore gadzirisa zvinoburitswa - Kuenzanisa kushambadzira chibvumirano chevateereri vakasiyana uye zvitoro zviri nyore. Sevha chero folio seyakajairwa template yako timu kuti ishandise zvakare uye zvakare. Iwe unogona kunyange kuiburitsa pane yako webhusaiti kuti uvake yako brand.
Chengetedza munhu wese achienderana - Ronga mapurojekiti ako uye zvinyorwa nemuchina - mushandirapamwe, dhipatimendi, mutengi, mishumo, nezvimwe. Wedzera vanobatsirana kana kugovana chiteshi chinongedzo kuti munhu wese awane mukana waanoda, panguva yaanoida.
Nguva dzose uve up-to-date - Ramba uchiona kufamba kwechikwata chako nema-in-app notices uye track track yekuita pamwe nefolio stats. Iwe unozogona kugadzirisa ako maitiro ekuita uye kuona mitsva yekukura mikana.
Saina Up kune Xtensio yeBhizinesi
Xtensio Template Raibhurari
Iwe unogona kugara uchitanga nesirati isina chinhu kana iwe unogona kushandisa matemplate eXtensio uye zviwanikwa pamatanho akasiyana ekumisikidza yako yekukura zano - kubva mukufumura wako akakodzera mutengi uye chigadzirwa-musika unokodzera kugadzira zvirevo uye zvirongo kana zvemukati zano maitiro, marekodhi ekutengesa uye rimwe bhizinesi chibvumirano.
Kuzivisa: Tiri Xtensio vanobatana.
Tags: kuvaka chibvumirano pamhepochibatiso manejimendimatemplate ekugadzirayekugadzira yekufambisahirebrainonline yekugadzira ongororoonline pdf dhizainionline onlineonline online zano kurongaxtensio
Chii chinonzi Kugamuchira Dhizaini? (Anotsanangura Vhidhiyo uye Infographic)